agbanye Totems | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
agbanye Totems bụ a 5 ukwu oghere game raara nye nwa afọ American mmepeanya na ekenịm ke backdrop nke a desert na nkume ugwu gburugburu. The totems iso nke ahịrị atọ nke nkpuchi nnọchianya nke mmadụ, nnụnụ & ụmụ anụmanụ na-egosi na n'oge ochie Mayan omenala. E nwekwara a mara mma obere Indian ekpemede dị nsọ totems o egwú mgbe ọ bụla ị na-a na-emeri Nchikota. E nwere nnọọ obi na nnukwu music ke ndabere na-eme ka ị na-enweta ụkwụ gị ka ya na-akụ. a mobile oghere dịghị nkwụnye ego egwuregwu nwere 11 ofu paylines ka nzọ na na ịkụ nzọ nso si £ 0,10 ka £ 100 kacha kwa atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke agbanye Totems:
Nke a dị ịtụnanya mobile oghere dịghị nkwụnye ego game e mepụtara site Thunderkick, a ọhụrụ Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ na cha cha ụlọ ọrụ ndị ugbua akwụ ewu ewu si ha okike game themes. Ha na-ikikere na usoro egwu egwuregwu Ụlọrụ na mba dị iche iche ebe ha egwuregwu na-egwuri.
E nwere ise isi akara na nke a mobile oghere dịghị nkwụnye ego egwuregwu na ha na udele na anya & onu okuko dum na-emeghe, a tiger ihu, red ihu yiri ọkụkọ, pink anụ ọhịa ihu, green nwaanyị ihu, acha anụnụ anụnụ ihu mmadụ na a na-ehi ụra udele. Open eyed udele na achasi W n'elu ya ihu bụ n'elu uru na akara na 25 ugboro gị ngụkọta nzọ ego ka a ga-merie na ise nke ya anya na a payline. The oghe-eyed na-ehi ụra udele masks nwekwara ndị bonus nnọchianya nke egwuregwu.
Ihi ụra Wild: The na-ehi ụra udele bụ anụ na akara ma-eme dị ka ndị isi na akara ma ghọọ anụ mgbe égbè eluigwe ukwu na-arụ ọrụ. The ọhịa ahụ nọ n'ọnọdụ niile akara na egwuregwu ma e wezụga ikposa akara. N'ọrụ ọhịa nwekwara akwụ ndị kasị elu na-emeri ahụhụ ise nke ya anya.
Égbè Eluigwe agwọ Gbasaanụ: The agwọ akara bụ ikposa atụmatụ a mobile oghere dịghị nkwụnye ego egwuregwu na mgbe ọ na-ala na a ukwu, ọ na-atọghata dum ukwu n'ime a égbè eluigwe ukwu. A égbè eluigwe ukwu atọghata niile na-ehi ụra udele akara n'ime ifịk wilds si otú ime gị Enwee Mmeri.
ego Game: Mgbe atọ ma ọ bụ karịa ikposa akara apụta n'oge a atụ ogho, ọ na-akpalite a bonus egwuregwu na ise spins na ya. All égbè eluigwe na-esi anwụde na-egosi n'oge a egwuregwu ga-oyi kpọnwụrụ ruo mgbe ọgwụgwụ nke niile 5 spins, awarding ị ndị nnukwu emeri stakes.
nchịkọta: Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma na-akwụ ụgwọ mobile oghere dịghị nkwụnye ego egwuregwu na ọtụtụ bonus atụmatụ na nnukwu mmeri i nwere ike irite uru na.